१२ घन्टामा ९१९ पु’रु’षसँग स’म्बन्ध – Ujyaalo Patrika
विश्वमा विभिन्न चिजमा रेकर्ड बनाए जस्तै से ‘क्स’मा पनि रेकर्ड बनाउने होड चलेको छ । जसमध्ये केही यस्ता रेकर्ड छन्, जुन यति अनौठो छ कि त्यसलाई विश्वास नै गर्न नसकिने खालका छन् । यस्ता अनौठो रेकर्डबारे तपाईले पहिलो पटक सुन्दा विश्वास नै गर्न सक्नु हुन्न । तपाईँलाई लाग्न सक्छ, यस्तो पनि हुन्छ र ? तर यस्ता धेरै अनौठो रेकर्ड छ ।
यो दुनियाँमा बस्ने मानिसहरु धेरै गजबका छन् । रेकर्ड राख्ने इच्छाकै कारण केही मानिसहरुले जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । यस्तै रेकर्ड राख्ने धुनमा एक महिलाले आश्चर्य लाग्दो काम गरेकी छिन् ।
एक महिलाले १२ घन्टामा ९१९ जना पुरुषसँग शा’रीरि’क स’म्बन्ध राखेकी छिन् । अमेरिकाकी यी महिलाको नाम लीजा स्पाक्र्स हो । महिलाले यो रेकर्ड पोल्यान्डमा बनाएकी हुन् । वास्तवमा हरेक वर्षमा हुने प्रतियोगिता हो । यसमा जो कसैले पनि सहभागी हुन पाउँछन् । जसले प्रतियोगितामा विजयी हुन्छ त्यसको रेकर्ड बन्छ । उनले प्रत्येक पुरुषको साथमा ४५ सेकेन्डको समय बिताइन् यसै क्रममा सम्बन्ध पनि राखिन् । उनको यस्तो मेहेनत पछि सफलता हासिल गरिन् ।
यस प्रतियोगितामा भाग लिनलाई धेरै मानिसहरुले इच्छा राखेका हुन्छन् । तर, कतिले त भने यस्तो क्रृयाकलापमा भाग लिन सोच्न पनि सक्दैनन् । लिजालाई रेकर्ड राख्नकै लागि यौ ‘नको साहारा लिन परेको छ ।
यो पनि : विश्व नै शाकाहारी भए के हुन्छ? यस्ता छन् ८ तथ्य
८. मासुको खपत नहुँदा मुटुसम्बन्धी रोग, मधुमेह, म’स्ति’ष्कघात र विशेषखालका क्यान्सरबाट पीडित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। यसो भए औषधिउपचारमा खर्च हुने विश्वभर जिडिपीको २–३ प्रतिशत रकम पनि जोगिनेछ।
Previous खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट
Next २२ बर्षे युवकका तीन श्रीमति: तीन श्रीमति नै मिलेर श्रीमानका लागि खोज्दैछन् चौथी श्रीमति